Koonfur galbeed ma Alshabaab iyo Mooshin ayaa loo dhisay? | allsanaag
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, ayaa hadda waxa ka socda mooshin biloow ah , oo sida la sheegay la doonayo in lagu rido madaxweynha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Kooxda Mooshinka wada ayaa waxay ku doodayaan iyaga oo marmarsiiyo uga dhigaya mooshinkooda ” madaxweyne Farmaajo ma ahayn inuu dhexdhexaad ka noqdo Khilaafka Carabaha ee waxay ahayd inuu uu si toos ah u taageero kooxda uu hogaaminayo Sacuudiga”
Mooshinka ayaa waxa madax ka ah Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan iyo Xildhibaano ka soo jeeda Koonfur galbeed. oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Mooshinkan bilowga ah ayaa sidoo kale waxa qayb ka ah kooxdii dib u socodka ahayd oo mucaaradka noqday markii ay danahooda gaar ahaaneed ay ka waayeen xukuumadda R’aisawsaare Kheyre.
Mooshinkan Muqdisho laga wado, waxa dhinac socda Koox xag jir ah, oo umadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku dilaya , intooda badanina waxay ka soo jeedaan maamulka Koonfur galbeed. Sababtuna waxay tahay Madaxweyniha Koonfur galbeed Shariif Xasan maanta ilaa maalintii dawlad Soomaaliyeed Carta, Jabuuti lagu soo dhisay, isagu wuxuu waqti badan gelinayey Mooshino, musuqmaasaq iyo sidii Qaran Soomaaliyeed uu lugihiisa marna ugu istaagi lahayn . Maanta shaqada uu Muqdisho ka wado waa midii uu soo samaynayey 17 sano, oo mar walba uu fal guracan oo qaran dumis ah ku kacoba ay umadda Soomaaliyeed ugu abaal gudayeen darajo ka saraysa tii hore , Sida Gudoomiye Baarlamaan. wasiirka Maaliyaddeed iyo hadda uu yahay madaxweynaha warshadda Alshabaab ee Koonfur galbeed.
Xildhibaanadii Baarlamanka Koonfur galbeed ee la doonayey inay wax ka badelaan nolosha Dadka reer Koonfur galbeed , iyaguna waxay ku mashquulsan yihiin amni xumo ay ka wadaa maamulka Jubbaland.
Xildhibaanadii federaalka Soomaaliyeed ee ka soo jeeday Koonfur galbeed, waa kuwa abaabulaya mooshin kasta oo laga keeno madaxda Soomaaliyeed. Waxayna u badan yihiin niman u soo shaqo tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
Tusaale Qaraxii ugu danbeeyeyee ninkii ka fuliyey magaaxidii ku taalay magaalada Muqdisho oo dadka bada oo Soomaaliyeed oo afurayey ku xasuuqay, wuxuu ka soo jeeday Koonfur galbeed. Wuxuu ku soo koray Guri Xildhibaan ka soo jeeda Koonfur galbeed. Xildhibaankaas Markii danbena noqday Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Arimahan aan kor ku soo xusnay oo dhan waxay tusaale u yihiin m’asuuliyad xumada ka jirtta Maamulka Koonfur galbeed iyo Siyaasiyiinta Koonfur galbeed inay yihiin Calool u shaqaystayaal aan cidna u shaqayn oo umaaddii la doonayey inay badbaadiyaan ama ay wacyi geiiyaan ka doorteen halka uu Bariisku ka bisil yahay maalintaas
In badan ayaa Warbaahinta Soomaaliyeed waxaad ka maqasheen Odayaasha beesha Raxanweyn oo been sheegaya oo leh dadkayaga ayaa Puntland lagu xasuuqaa ama lagu cunsuriyeeyaa , iyaga oo ujeedadoodu tahay inay dadkooda ku kiciyaan si ay alshabaab ugu biiraan ama ay tahay baaq dahsoon oo ay siyaasiyiintooda ugu baaqayaan inay mooshin keenaan si maalmo loo qaxweeyo
Ugu danbayntii marka danbe oo aad maqashaan siyaasiyiinta Raxanweyn iyo Odayaasha Digil oo Miirfle oo leh dadkayaga ayaa lagu cunsuriyeeayaa ama lagu xasuuqaa Puntland. waxaad xasuusisaan in xasuuqii ka dhacay Afurur ay sabab u ahayeen mooshinadooda iyo siyaasad xumadoodu madaxda Koonfur galbeed ay dadkooda kula kaceen, oo shacakoodii ay ka doorteen Doolar.
Dawladda Puntland, Shacabka Puntland, maamulka gobolka Bari, maamulka degmada Boosaaso, laamaha amniga Puntland iyo dadkii Af urur lagu xasuuqay beelahii ay ka soo jeedeen iyaga oo ilaalinaya Islaanimada, Dawladnimada Soomaalinimada, wada noolashaha, is dhex galka iyo ma’suuliyadda ka saaran umadda Soomaaliyeed waxay ka gaabsadeen inay sheegaan ama ay baahiyaan xasuuqyada iyo dilka Puntland lagu hayo dadka ugu badan oo fuliyaa halka ay ka soo jeedaan. Iyaga oo og intooda badan halka ay ka soo jdeedaan.
← Madaxweynaha Puntland oo Ka Gayb Galay Gunaanudka Tartanka Quraanka Kariim Ka ah ee Heer Puntland. Waa been Dadqalatooyin ayaa ka baxay Calmadow →